Mourinho oo bidhaamiyay sixiixidda Pogba - BBC News Somali
Mourinho oo bidhaamiyay sixiixidda Pogba
22 Luulyo 2016
Image caption Kooxo badan ayaa la sheegay in ay danaynayaan Pogba oo khadka dhexe ku wanaagsan
Jose Mourinho ayaa bixiyay bidhaamintii u xoogbadnayd ee ku saabsan in Manchester United ay doonayso in ay kooxda Juventus dib uga soo saxiixato Paul Pogba, isaga oo yiri meeshaad qiiq ku aragto dabna wuu yaallaa.
Waxaa lagu soo waramayaa in kooxda lagu naanayso Red Devils ay heshiis ku galeen in 100 milyan gini ay kula soo wareegaan ciyaaryahankan Faransiiska ah ee 23 jirka ah.
Image caption Man united hal milyan kayar ayay ku iibisay haddana 100 milyan ayay ku raadinaysaa ayaa la leeyahay
Qiimahaas haddii lagu kala gatana wuxuu noqon doonaa kii ugu qaalisanaa ee ciyaartoy lagu kala gato adduunka oo dhan.
Pogba ayaa ka tagay garoonka Old Trafford sanadkii 2012 isaga oo 19 jir ah iyadoo kooxda Talyaaniga ah ay bixisay 800,000 gini.
“ma doonayo in aan iska hadlo laakiin i aamina hal ciyaartoy oo kali ah ma dabo socono.
Tababaraha reer Boortaqiis ilaa iyo hadda wuxuu soo iibsaday saddex ciyaartooy oo kala ah Eric Bailly oo Villarreal laga keenay, Henrikh Mkhitaryan oo Borussia laga soo gaday khadka dhexena ka dheella iyo weeraryahan Zlatan Ibrahimovic.
Mourinho ayaa la waydiiday ma laga yaaba in aad soo saxiixato Pogpa? wuxuuna ku jawaabay in ay qorshaysteen in ay soo saxiixdaan afar ciyaaryahan saddex ay hadda heleen mid kalena ay ku soo dari doonaan.
Ugu dambayna wuxuu sheegay in ay horyaalaan labo ciyaartoy mid koodna ay soo saxiixan doonaan.